विदेशी मुद्राको विनिमय दरः आज कुन देशको विनिमयदर कति ? हे’र्नुहोस् (तालिका सहित)…. – SUDUR MEDIA
March 26, 2021 March 26, 2021 AdminLeaveaComment on विदेशी मुद्राको विनिमय दरः आज कुन देशको विनिमयदर कति ? हे’र्नुहोस् (तालिका सहित)….
यो पनि हेर्नुहोस्ः हिंजो बढेको सुनको भाउ आज यति धेरैले घट्यो ! हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो – आज मिति २०७७ साल चैत १३ गते शुक्रबारको दिन सुनको मूल्य तोलामा ६०० रुपैयाँले घटेकाे छ । अघिल्लो दिन हिंजो बिहीबार तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ शुक्रबार पुनः घटेको हो ।